Wiricheya Takura homwe kana Tote Kuchengeta Zvinhu - Zvishongedzo
Wiricheya Takura Homwe
hwiricheya takura homwe packs kubvumira iwe carry kana chengetera wega zvinhu zvakaita semagirazi nemapenzura. Mazhinji masaga anokwana padivi pechigaro chako, kazhinji padhesiki maoko akareba. Totes kune rimwe divi, inowanzo gara pasi pechigaro chako, kana kunamira pazvigaro zvechigaro. hwiricheya totes inowanzove ye kutakura zvinhu zvidiki. Kune iyo CP2 inotakura homwe, inogadzirwa neyakaomarara yakasimba zvinhu zvakasimbiswa zvakanaka uye ine velcro inokwidza latch kune yakatarisana kumagumo kuti ichengetedze pachayo kune wiricheya. Iwe unogona kuisa nhare, makemikari, zvikwama, uye chero zvimwe zvinhu zvirinyore kurerutsa kwekuchengetedza uye kuwana. Iyo inofanirwa kana uchienda!
CP2 - Arm Pouch huwandu